Istaraatiijiyad fudud oo SMA ah oo aad si fudud ugu isticmaali karto Xulashada Jeebka - Pocket Option Review
Isdiiwaangelintu waa bilaash waxayna qaadanaysaa ilbiriqsi kaliya…
1 Waa maxay celceliska dhaqaaqa fudud (SMA)?
2 Sida loogu daro tilmaame SMA shaxda Xulashada Jeebka
3 Sidee loo furaa ganacsiyo iyadoo la adeegsanayo tilmaame SMA ee Olymp Trade?
Waa maxay celceliska dhaqaaqa fudud (SMA)?
Celceliska dhaqdhaqaaqa fudud waa mid ka mid ah noocyada celceliska dhaqdhaqaaqa. Celceliska dhaqdhaqaaqa fudud waa xisaabinta xisaabeed ee la gaaro ka dib marka lagu daro qiimaha xidhitaanka ee muddada la doortay oo loo qaybiyay tirada shumacyada.
Waxaa jira laba nooc oo ah celceliska dhaqdhaqaaqa fudud ee celceliska muddada gaaban iyo celceliska muddada dheer halkaasoo celceliska muddada gaaban uu si degdeg ah uga jawaabo isbeddelka qiimaha amniga hoose halka celceliska muddada dheer uu si tartiib ah u falceliyo.
Habka celceliska dhaqdhaqaaqa fudud wuxuu noqon karaa
Halka Cn = Qiimaha hantida ee xilli n
n = tirada guud ee xilliyada.
Xisaabinta celceliska dhaqdhaqaaqa fudud waa mid aad u fudud. Ka soo qaad inaad rabto inaad hesho SMA ee tobanka shumac ee ugu dambeeya. hadda, waxa samayn doona waa uun ku dar qiimaha xidhitaanka tobankii shumac ee ugu dambeeyay ka dibna u qaybi toban. Waqtigii hore ganacsatadu waxay ku qasbanaadeen inay xisaabiyaan SMA iyaga oo ka dibna ku dheji isla jaantuska si kastaba ha ahaatee nasiib wanaag, Xulashada Jeebka , uma baahnid inaad codsato xisaab kasta maadaama shaqada xisaabinta ay horay u samaysay software Pocket Option .
Sida loogu daro tilmaame SMA shaxda Xulashada Jeebka
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad gasho akoonkaaga Doorashada Jeebka . Kaliya geli emailkaaga, iyo eraygaaga sirta ah oo guji login. marka xigta ku dhufo sanduuqa tilmaame oo raadi celceliska dhaqdhaqaaqa.
Hadda, dhagsii astaanta qalinka oo u beddel xilliga 14.
Sidoo kale, ka dooro hal celcelis dhaq-dhaqaaq kale oo ka menu-ka oo u beddel wakhtiga 30.
Sidoo kale, beddel midabka laynka adigoo gujinaya astaanta qaababka.
Sidee loo furaa ganacsiyo iyadoo la adeegsanayo tilmaame SMA ee Olymp Trade?
Ku-ganacsiga tusaha SMA waa mid aad u fudud. Diiradaada ugu weyn waa inay ahaato isgoyska labada xariiq ee SMA. marka ay isqabsadaan waxa ay abuurtaa calaamado gad iyo gad.
Sadarka 14 waa celcelis waqti gaaban oo si degdeg ah uga falceliya isbeddellada qiimaha halka line 28 uu ka falceliyo isbeddelka qiimaha. Marka xariiqda 14 ay isku xirto xariiqda 28 ee xagga hoose waxay calaamad u tahay isbeddelka qulqulka iyo halkan waxaan ku dhejin karnaa ganacsiga iibka si la mid ah marka xariiqda 28 ay isku xirto xariiqda 14 ee sare waxay calaamad u tahay isbeddelka isbeddelka.
Marka la eego kor ku xusan waa jaantuska USD / JPY, waxaanan si cad u arki karnaa in xariiqda 14 ee isgoysyada xariiqda 28 ee hoose iyo xariiqda dambe ee 14 ay kor u kacday kor u kaca kor u kaca waa calaamad muujinaysa isbeddel xoog leh oo halkan waxaan ku dhejin karnaa ganacsi iibsi.
Sidoo kale, kor ku xusan waa jaantuska USD / JPY waxaanan arki karnaa in xariiqda 14 ee isgoysyada xariiqda 28 ee ugu sareysa laakiin ka hooseeya xariiqa 28 waana calaamad muujinaysa isbeddelka isbeddelka iyo halkan, waxaan ku dhejin karnaa ganacsiga iibinta halkan.
Markaa, tani waa sida aad uga ganacsato celcelis dhaqdhaqaaq fudud. Ku-ganacsiga celceliska dhaqdhaqaaqa fudud maaha cilmi gantaal kasta fikradda aad ayey u fududahay kaliya waxaad u baahan tahay inaad ku dhaqanto istaraatiijiyadan koontada demo ee Pocket Option iyo marka aad ku dhaqanto wareejin kugu filan jeebka ikhtiyaarka xisaabta dhabta ah . Ilaa iyo markaas waxaan kuu rajeynayaa ganacsi farxad leh iyo nasiib wacan.
Dhaqdhaqaaqa celceliska caanaha
Dhaqdhaqaaqa celceliska xisaabinta
Maxay SMA u taagan tahay
Sma celceliska dhaqdhaqaaqa
Xisaabi celceliska dhaqdhaqaaqa
Xisaabinta celceliska dhaqdhaqaaqa
Previous articleWaa maxay EMA iyo sida loogu isticmaalo Xulashada Jeebka?
Next articleBaro farshaxanka isticmaalka tilmaame MACD ee Xulashada Jeebka